बाबुराम भट्टराईको प्रश्न- सीतालाई वली चढाउने चलन कहिलेसम्म?
नेपाल लाइभ बिहीबार, असोज १६, २०७६, ११:५५
काठमाडौं– समाजवादी पार्टीका संघीय अधयक्ष डा बाबुराम भट्टराईले महरा प्रकरणलाई सत्ता शक्तिको धाकमा युटर्न गराइएको संकेत गरेका छन्।
रोशनी शाहीले सभामुख कृष्णबहादुर महराबाट बलात्कृत भएँ भनेर सुरुवातमा अभिव्यक्ति दिए पनि पछि बोली फेरेकी थिइन्।
'सत्ताशक्तिको धाकमा एउटा पुरूषले परस्त्रीगमन गर्ने! भेद खुलेपछि ती स्त्रीलाई नै फकएर/धम्काएर युटर्न गराउने र आफ्नो टाउको बचाउने! परपुरूषगमन गरेबापत अर्को पुरूष/लोग्नेले घरनिकाला गर्ने! यो राम-रावण द्वन्दमा सीतालाई वली चढाउने चलन कहिलेसम्म? यही हो महिलामुक्ति/सांस्कृतिक क्रान्ति, कणहरू?', भट्टराईले ट्विट गरेका छन्।
बिहीबार मात्रै शाहीका पतिले आफूहरु अगल अलग बस्ने निर्णय गरेको हस्ताक्षरसहितको फोटो राखेका थिए।
भट्टराईले मंगलबार पनि सत्ताशक्ति र धनको बलमा बलात्कार/हत्या जस्ता जघन्य अपराधहरू लुकाउने काम पुराना सत्ताहरूले गरिरहेका र हिजोका क्रान्तिकारी कमरेडहरूले पनि सत्तामा पुगेपछि त्यही हर्कत गर्ने हो भने त्यत्रो वलिदानको के अर्थ रह्यो भन्दै प्रश्न गरेका थिए। 'रातो झण्डा ओढ्दैमा असत्य र अन्याय टिक्दैन', उनले चेतावनी दिएका थिए, 'सबैलाई चेतना भया!'
नेकपामा विवाद यथावत, चार सदस्यीय कार्यदलले सहमति खोज्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’बीचकाे वार्ता भोलि फेरि... आइतबार, असार २१, २०७७
प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा सत्तारोहणका लागि कांग्रेस सभापति देउवालाई ‘हरियो झन्डा’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्तारोहणका लागि सन्देश पुर्‍याएका छ... आइतबार, असार २१, २०७७
प्रधानमन्त्रीको सन्देश बोकेर देउवा निवासमा नेम्वाङ, भन्छन्– सत्ता साझेदारीको कुरा जसले सुनायो उसैलाई सोध्नुस् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सन्देश बोकेर नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुभासचन्द्र नेम्वाङ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई... आइतबार, असार २१, २०७७